ကြွက်များတွင်နာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်မှုအပြီးတွင် ဦး နှောက်၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုချို့တဲ့မှု - ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုနှင့်စိတ်ကျဆေးဝါးတုံ့ပြန်မှု (၂၀၁၄) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn On
ကြွက်များတွင်နာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်ပြီးနောက်ဦးနှောက်ကိုဆုလာဘ် function ကိုအတွက်လိုငွေပြမှုအမြဲတည်သော: လွယ်ကူစွာထိခိုက်, ခံနိုင်ရည်နှင့်လက္ခဏာတုန့်ပြန် (2014)
Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2014 အောက်တိုဘာ 1; 76 (7):542-9 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2014.01.013 ။
der-Avakian တစ်ဦးက1, Mazei-Robison က MS2, Kesby JP1, Nestler EJ3, Markou တစ်ဦးက4.
Anhedonia, ဒါမှမဟုတ်ကြိုးလှုပ်ရှားမှုများတွင်လျော့နည်းသွားအကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်အပျော်အပါး, စိတ်ကျရောဂါရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့နှင့်ဦးနှောက်ဆုလာဘ် circuitries အတွက်လိုငွေပြမှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်။ လူမှုစိတ်ဖိစီးမှု anhedonia induces နှင့်ဦးနှောက်ဆုလာဘ် function ကိုအပေါ်လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမလုံလောက်မှု, နားလည်သော်လည်း, စိတ်ကျရောဂါ၏အန္တရာယ်တိုးပွားစေပါသည်။
လူမှုရေးရှုံးနိမ့်နေစဉ်အတွင်းနာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်, 1) ဦးနှောက်ဆုလာဘ် function ကိုတုံ့ပြန်အတွက် intracranial Self-stimulation လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို အသုံးပြု. ကြွက်များတွင် 2) ဦးနှောက်ဆုလာဘ် function ကို () နှင့်ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက်နှင့်ဆက်စပ်ပြမော်လီကျူး၏ပရိုတိန်းပါဝင်မှုနှုန်း: ဒီလေ့လာမှုကိုအောက်ပါအကဲဖြတ် လူမှုရေးရှုံးနိမ့်ခြင်းနှင့် fluoxetine ကုသမှုပြီးနောက်စိတ်မကျဆေး Antidepressants fluoxetine နှင့်ရေရှည်ကုသမှု (5 ကီလိုဂရမ် / နေ့ / mg) နှင့် desipramine (10 mg / kg / နေ့), နှင့် 3) အတင်းအကျပ်ရေကူးစမ်းသပ်အပြုအမူ။
ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြွက်များတွင်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်အလှနျနှင့်ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့တစ်ခုမွဲ anhedonic တုံ့ပြန်မှုထင်ဟပ်, ဦးနှောက်ဆုလာဘ် function ကိုယုတ်လျော့, ဒဏ်ခံကြွက်မျှရေရှည်ဦးနှောက်ဆုလာဘ်လိုငွေပြမှုပြသသော်လည်း။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌, လူမှုရေးရှုံးနိမ့်, မခွဲခြားဘဲလွယ်ကူစွာထိခိုက်သို့မဟုတ်ခံနိုင်ရည်၏, ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက်လျော့နည်းသွားသာလွယ်ကူစွာထိခိုက် rapamycin ၏တိုးလာ phosphorylated နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေပစ်မှတ်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်သော်လည်း, phosphorylated AKT တိုးတက်လာခဲ့သည်။ Fluoxetine နှင့် desipramine အောက်ပိုင်းပြောင်းပြန်, ဒါပေမယ့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြွက်များတွင်ပိုမိုမြင့်မားမရ, စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ဦးနှောက်ဆုလာဘ်လိုငွေပြမှု။ လူမှုရေးရှုံးနိမ့်ပြုသကဲ့သို့ Fluoxetine, အအတင်းအကျပ်ရေကူးစမ်းသပ်မှုအတွက် immobility လျော့နည်းသွားသည်။
ဤရလဒ်သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုဖို့ differential ကိုမြဲ anhedonic တုံ့ပြန်မှုဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက်၏လွတ်လပ်သောမော်လီကျူးများပြ ventral tegmental ဧရိယာကကမကထပြုခဲ့နှင့်ပိုမိုစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် anhedonia လက္ခဏာကုသမှုခုခံနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းညွှန်ပြစေခြင်းငှါ။ အကြံပြု စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်လက္ခဏာအရေးယူမှုမှခုခံနှင့်ဆက်နွယ်သောဤအမူအကျင့်များနှင့် neurobiological အချက်များထည့်သွင်းစဉ်းစားစိတ်ဖိစီးမှု-related စိတ်ဓါတ်များမမှန်ဆက်ဆံဖို့ဝတ္ထုပစ်မှတ်၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုမြှင့်တင်ရန်လိမ့်မည်။
Anhedonia; BDNF; ICSS; စိတ်ကျရောဂါ; mTOR; စိတ်ဖိစီးမှု